कोरोनाबाट एकै दिनमा ७ हजारको मृत्यु, २४ घण्टामा कहाँ के भयो ? – Green Ilam
कोरोनाबाट एकै दिनमा ७ हजारको मृत्यु, २४ घण्टामा कहाँ के भयो ?
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट पछिल्लो २४ घण्टामा ७ हजार ६२ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ७७ हजार २ सय पुगेको छ ।
जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा ७५ हजार २ सय ३४ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या २५ लाख ६१ हजार ९ सय १५ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा अमेरिकामा २५ हजार ९ सय ८५ संक्रमित भेटिएका छन् भने २ हजार ८ सय ४ जनाको मृत्यु भएको छ । अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या ८ लाख २४ हजार १ सय ४६ पुगेको छ भने मृतकको संख्या ४५ हजार पुगेको छ ।
यस्तै स्पेनमा मंगलबार मात्रै ३ हजार ९ सय ६८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ४ सय ३० जनाको मृत्यु भएको छ । स्पेनमा संक्रमितको संख्या २ लाख ४ हजार १ सय ७८ पुगेको छ भने २१ हजार २ सय ८२ जनाको मृत्यु भएको छ ।
इटालीमा पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ७ सय २९ जना संक्रमित थपिएका छन् भने ५ सय ३४ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै इटालीमा संक्रमितको संख्या १ लाख ८३ हजार ९ सय ५७ पुगेको छ भने मृतकको संख्या २४ हजार ६ सय ४८ पुगेको छ ।
फ्रान्समा मंगलबार २ हजार ६ सय ६७ जना नयाँ संक्रमित थपिँदा ५ सय ३१ जनाको मृत्यु भएको छ । यहाँ अहिलेसम्म १ लाख ५९ हजार २ सय ९९ जना संक्रमित भएका छन् भने २० हजार ८ सय २९ जनाको मृत्यु भएको छ ।
जर्मनीमा पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ३ सय ८८ मा कोरोना पुष्टि भएको छ भने २ सय २४ जनाको मृत्यु भएको छ । यहाँ संक्रमितको संख्या १ लाख ४८ हजार ४ सय ५३ पुगेको छ भने ५ हजार ८६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
यस्तै बेलायतमा मंगलबार ४ हजार ३ सय १ जना नयाँ संक्रमित थपिँदा ८ सय २८ जनाको मृत्यु भएको छ । बेलायतमा अहिलेसम्म १ लाख ३० हजार १ सय ७२ जना संक्रमित हुँदा १७ हजार ३ सय ७८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ५ सय ४१ मा कोरोना पुष्टि भएको छ भने ५३ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै भारतमा संक्रमितको संख्या २० हजार ८० पुगेको छ भने मृतकको संख्या ६ सय ४५ पुगेको छ ।
नेपालमा भने मंगलबार एकै पटक ११ जना नयाँ संक्रमित भेटिएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या ४२ पुगेको छ ।
‘टम एण्ड जेरी’ निर्देशक जिन डिचको निधन